BACHELORETTE BECCA KUFRIN UYA KWENZA UKHETHO OLUNGENAKWENZEKA KWISIPHELO SEXESHA - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato Bachelorette Becca Kufrin Uya kwenza uKhetho olungenakwenzeka kwiSiphelo seXesha
Bachelorette Becca Kufrin Uya kwenza uKhetho olungenakwenzeka kwiSiphelo seXesha
I-BACHELORETTE-'Isiqendu se-1410 '-Isiphelo seXesha- Emva kokusinda kwiindlela ezothusayo kunye nohambo, kunye nohambo oluzele yintsini, iinyembezi, uthando kunye nempikiswano, u-Becca usiya eMaldives kunye nezidanga zakhe ezimbini zokugqibela: uBlake noGarrett. Unokubona ikamva kunye namadoda omabini, kodwa ixesha liyaphela. Emva kwexesha, u-Becca uza kuba se-studio kunye no-Blake no-Garrett ukuze baxoxe ngesiphumo esimangalisayo kunye nezigqibo ezothusayo ezitshintshe bonke ubomi babo ngonaphakade, kwi-'Bachelorette: Isiphelo seYure eziNtathu, 'esasaza NGOMVULO, AUG. I-6 (8: 00-11: 00 pm EDT), kwiNethiwekhi yeTV yeTV. (ABC / Paul Hebert) CHRIS HARRISON, BECCA KUFRIN
Ngu: Joyce Chen 08/06/2018 ngo-5: 30 PM
bahlawulela ntoni abazali bomyeni
Nini Bachelorette Inkwenkwezi u-Becca Kufrin unikezela ukuvuka kwakhe kokugqibela komnye wabaphumeleleyo abaseleyo uGarrett Yrigoyen noBlake Horstmann ngexesha lokugqibela lonyaka ngoMvulo, nge-6 ka-Agasti, ababukeli baya kubona ukuba isigqibo ngokwaso khange senziwe kancinci. .
Bobabini uKufrin kunye noChris Harrison uxelele Ukuzonwabisa ngokuhlwanje kudliwanondlebe lwamva nje lokuba abalandeli banokulindela ukuba isiphelo sibe ngumxube ovuthuzayo wesivumo, ukukhathazeka, ukungazithembi kunye nothando.
Uya kufumana zonke iimvakalelo, uKufrin, 28, utshilo. Uya kufumana uthando. Uya kufumana iinyembezi. Uza kufumana intsini. Uhambo lwaluguquguqukayo. Ndaziva yonke into kwiveki ephelileyo, kwaye yayinzima. Kwaye, ndiyathetha, konke oko kuyakudlala.
U-Kufrin, othe kwiveki ephelileyo wajongana negalari epheleleyo ye-ex ngexesha le-Men Tell All, wongeze ukuba akanakulinda isiphelo sokudlala ukuze yena kunye nomlingane wakhe (kuvakale ngathi uyabandakanyeka!). phandle kwindawo evulekileyo.
Silungile, utshilo. Silungele ukwenziwa nje, ukuba sibe phakathi kwabantu. Ndiyazi ukuba iyakuphambana xa loo mzuzu ufika, kodwa kuya kufaneleka kakhulu. Ndonwabile kakhulu ngalo mhla.
I-BACHELORETTE-Isiqendu se-1410-IsiGqibela seXesha- Emva kokusinda ekujikeni okuothusayo kunye nokujika, kunye nohambo oluzele yintsini, iinyembezi, uthando kunye nempikiswano, u-Becca ukhokelela eMaldives kunye nezidanga zakhe ezimbini zokugqibela: uBlake noGarrett. Unokubona ikamva kunye namadoda omabini, kodwa ixesha liyaphela. Emva koko, u-Becca uza kuba se-studio kunye no-Blake kunye no-Garrett ukuze baxoxe ngesiphumo esimangalisayo kunye nezigqibo ezothusayo ezitshintshe bonke ubomi babo ngonaphakade, kwi-Bachelorette: Isiphelo esineeyure ezintathu, esasaza NGOMVULO, AUG. I-6 (8: 00-11: 00 pm EDT), kwiNethiwekhi yeTV yeTV. (ABC / UPaul Hebert)
Harrison, owongamele amaxesha ali-14 IBachelorette , uxelele i-ET ukuba u-Kufrin owonwabileyo-emva kwexesha uza ngexabiso lezigqibo ezintle.
Kukutsala amathumbu. Kukukhathaza amathumbu ngokupheleleyo, utshilo ngesiphelo sonyaka. Yintoni eyenzekileyo eMaldives, intle kwaye inoburhalarhume ngaxeshanye. Kuyaphambana ukuba [ezo mvakalelo] zonke kwisiphango esinye.
UHarrison ukwabhekisele kwitourado yokugqibela ka-Kufrin kwi-Bachelor franchise, apho wayecetyiswa ukuba ngelo xesha- Isidanga UArie Luyendyk Jr. kumabonakude wesizwe, kuphela ukuba ahlukane neeveki zakhe kuthethathethwano lwabo lokuba kunye nembaleki yexesha elizayo, uLauren Burnham.
Uyazi, yintoni uArie awela kuyo, uBecca wenza, naye, wahlekisa. Uthandana namadoda amabini: uBlake noGarrett. Wenza ukhetho olungenakwenzeka kwaye umzisa ngokoqobo emadolweni.
indlela yokuchonga idayimane yokwenyani
IBachelorette Ixesha lokugqibela le-14 liza kudlala kwi-ABC ngentsimbi yesi-8. ET.
Imibala yodonga egxininisayo
Umahluko phakathi kwe-ms mrs kunye ne-miss
Umama wabayeni beengubo zentwasahlobo ka-2017
izipho zomtshato zikatata ezivela kunyana
amazwi othando kuye